Ivon-toerana ho an’ny kolontsaina : Haharitra telo andro ny fankalazana ny faha-5 taonan’ny IKM -
AccueilVaovao SamihafaIvon-toerana ho an’ny kolontsaina : Haharitra telo andro ny fankalazana ny faha-5 taonan’ny IKM
Ivon-toerana ho an’ny kolontsaina : Haharitra telo andro ny fankalazana ny faha-5 taonan’ny IKM
14/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Toerana iray natao hanandratana sy hampiroboroana ny kolontsaina malagasy. Haharitra telo andro ny hetsika fankalazana ny faha-5 taona nijoroan’ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina malagasy na ny IKM etsy antsahavola. Hosantarina ny alakamisy 19 avrily ho avy izao izany. Hetsika ho eo ambany fiahian’ny minisitry ny Kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary fiarovana ny vakoka, ary eo ambany fitantanan-Drabenantoandro Casimir, filoham-boninahitra sy filoha mpanorina ny IKM.
Mandritra ny lanonam-panokafana ny fankalazana dia hisy ny fandraisan’anjaran’ireo mpanakanto samihafa efa niara-niasa tamin’ny Ivon-toerana tao anatin’izay fotoana izay.
Hifantoka amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo sekoly vitsivitsy, avy amin’ny fanjakana sy sekoly tsy miankina, ary sekoly frantsay ny hetsika ny zoma 20 avrily. Izany dia ho fampahafantarana ireo ankizy sy tanora ny momba ny ivon-toerana, ary hihaonana amin’ireo mpandraharaha samihafa eo anivon’ny IKM.
Amin’ny andro faha-3, ny sabotsy 21 avrily, dia hisy ny hetsika mahakasika ny tontolon’ny angano ho an’ny besinimaro, ary arahan’ny hetsika hiarahana amin’ireo mpamorona eo amin’ny sehatry ny lamaody.
Tao anatin’ny 5 taona nijoroana, vinan’ny IKM ny ahatonga ny ivon-toerana ho lasa sehatra fifanakalozana ho an’ny fampiroboroboana ny kolontsaina marolafy, ny fampandrosoana ny firenena sy ny famolavolana olom-pirenena vanona amin’ny alalan’ny kolontsaina, ary ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana maharitra amin’ny alàlan’ny fitantanana sy fiarovana ny tontolo iainana.
Tsiahivina fa manana efitra malalaka afaka mandray fampisehoana, sy toerana natokana ho an’ny fampirantiana ny IKM etsy Antsahavola, ary tsy mena mitahy amin’ireo ivon-toerana hafa.